လိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်းနှင့်မတိုက်ဆိုင်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုအမြင်အာရုံ၌လိင်ကွဲပြားမှုများ (၂၀၀၈) - Your Brain On Porn
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2008 ဧပြီ; 37 (2): 219-28 ။ EPub 2007 သြဂုတ် 1 ။
Lykins အေဒီ1, Meana M က, Strauss မိသားစုဆရာဝန်.
ဒါဟာခေါ်ဆောင်သွားပစ္စည်းများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု (ဥပမာ, မှတ်ဉာဏ်, လိင်အင်္ဂါ arousal, ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများ) ခေါ်ဆောင်သွားပစ္စည်းအတွက်အမြင်အာရုံတွေကိုမှ differential ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုအားဖြင့်လည်းရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့လိင်ကွဲစုံတွဲ၏ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့် Non-ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေနှင့်အတူ 20 လိင်ကွဲယောက်ျားနဲ့ 20 လိင်ကွဲအမျိုးသမီးများကိုပေးအပ်နှင့်မြင်ကွင်းတစ်ခုတင်ဆက်မှုကာလအတွင်း၎င်းတို့၏မျက်စိလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံ။ ရလဒ်များခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့် Non-ခေါ်ဆောင်သွားသတင်းအချက်အလက်အမြင်အာရုံအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောထုံးစံ၌လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကွောငျးယခင်တွေ့ရှိချက်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားများအတွက်သိသိသာသာရှည်အမျိုးသမီးများ၏ ပြု. , အမြိုးသမီးမြားကိုသိသိသာသာပိုရှည်ယောက်ျားလုပ်ခဲ့တယ်ထက်တူညီတဲ့လိင်ကိန်းဂဏန်းများကြည့်ရှုသည်ထက်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိန်းဂဏန်းများမှာကြည့်ရှုကြ၏။ အတွင်း-လိင်အမြိုးသမီးမြားဆနျ့ကငျြဘများနှင့်အတူတူပင်လိင်ကိန်းဂဏန်းများအကြားအညီအမျှမိမိတို့၏အာရုံကိုလူစုခွဲရန်သည်ထင်ရှားသော်လည်းယောက်ျား, တူညီတဲ့လိင်ကိန်းဂဏန်းများမှနှိုင်းယှဉ်ပါကဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိန်းဂဏန်းများအဘို့ခိုင်ခံ့အမြင်အာရုံအာရုံကိုဦးစားပေးခဲ့ကြောင်းအကြံပြုလေ့လာဆန်းစစ်။ ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားမှုသို့သော်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေကန့်သတ်မခံခဲ့ရပေမယ့်အဖြစ်ကောင်းစွာ Non-ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေအတွက်သက်သေ။ သိသာထင်ရှားသောလိင်ကွဲပြားမှုမြင်ကွင်းများ၏ဆက်စပ်ဒေသမှအာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။ ရလဒ်များအမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထတစ် သာ. ကြီးမြတ်သည် non-specific ဖေါ်ပြခြင်းမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ၏အလားအလာထောက်ခံအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဤသည်အနက်ကို image ကိုအတိအလင်းခေါ်ဆောင်သွားမဟုတ်ပါဘူးပင်သောအခါ, လိင်ရာမှတဦးတည်း Oriental ၏ပုံရိပ်များဖို့ခေါ်ဆောင်သွား valence လည်းမရှိယူဆတယ်။ ဒါဟာအစအမြင်အာရုံအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ခေါ်ဆောင်သွား valence အကြားဆက်ဆံရေးယူဆတယ်။